warkii.com » Kareena kapoor hadii ee xoog kuqabsatay Instegram aabaheyd ayaa markaan kabta lagashtay!!!
Kareena kapoor hadii ee xoog kuqabsatay Instegram aabaheyd ayaa markaan kabta lagashtay!!!
Kareena Kapoor Khan aabaheed Randhir Kapoor ma ku soo biiray barta Instagram? dood ayaa jataagneyd arintaas maalmihi udambeeyay maadaama halyeyga aanlaga fileyn xiligaan inuu social media soo dhaxgalo
Aktarada Bollywoodka Kareena Kapoor Khan ayaa qabsatay dunida internetka markii ay bilawday Instagram. Sida ku saabsan wararkii ugu dambeeyay, Kareena aabeheed sidoo kale wuxuu raacay raadkeeda wuuna sameeyay postigiisa ugu horeeyay ee Instagram.
Haa, si sax ah ayaad u akhriday! aktarka halyeeyga akoonkiisa ma laha wax sawir ah oo muuqaal ah. Laakiin, wuxuu la wadaagayay sawirro aan horay loo arkin oo ka tirsan qoyska Kapoor oo uu ku jiro Taimur Ali Khan Pataudi. Koontada ayaa sidoo kale lagu arkay sawirada maalmihii Rishi Kapoor ee cisbitaalka sidokale xaaskiisa Neetu Kapoor, Karisma Kapoor iyo Randhir.
Radhir dhowr film ayuu kasoo muuqday kiisa ugu xiisaha badnaa waxuu ahaa filmka Housefull2 uu kalasoo muuqday walaalkiis geeriyooday Rishi kapoor ..Radhir waxuu leeyahay hadda Social media waa inaa soofiiriyaa
Previous articleKooxda Khaali peeli oo raali galin siiyay fanaanada caanka ah Beyonce’ Ishaan khater iyo Ananya Shaqo ee qabteen ayee kulaabanayaan!!